Jinxin - Extruder စက်, ဖလားစက်, ဖလားပုံနှိပ်စက်, အဖုံးပုံနှိပ်စက် Making
သင့်ရဲ့အမိန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်းကျပ် QC ဌာနတို့ကကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်နေကြသည်။
running ပုလွန် 10 နှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထံမှကောင်းသောကျော်ကြားမှုရရှိခဲ့သည်။
မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ထုတ်ကုန်များအပြင်, JinXin ယုံကြည်စိတ်ချရသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ပင်အစွန်းရောက်အခြေအနေများအတွက် - ဒါကအကြှနျုပျတို့သညျအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ခွင့်ပြုဆိုလိုသည်။
စက်ဖွဲ့စည်းခြင်း JZRC-720-650 CNC Precision (ဇိမ်ခံကား)
JZRC (A / B) မှ -720-650 CNC Precison ဖွဲ့စည်းခြင်းစက်
Jinxin Machinery မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
ဂွမ်ဒေါင်း Jinxin Machinery Co. , Ltd မှ5826㎡နှင့်အတူဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်ရှိပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်သည့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဆယ်စုနှစ်အတွေ့အကြုံများကျော်နှင့်အတူဒီဇိုင်းနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးစက်နှင့်စားနပ်ရိက္ခာထုပ်ပိုးစက်အတွက်အထူးပြုသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအများအပြားအကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာပါဝင်ပါသည်သောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ကထူထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ခေတ်သစ်အပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများမိတ်ဆက်နှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်အဆင့်မြင့်အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏အဓိကထုတ်ကုန်ဖလားစက်, Bottle သ-မှုတ်စက်နှင့် sucker စက်ဖြည့်စက်, ဖလားပုံနှိပ်စက်, ဖုန်စုပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းစက်, Making, စာရွက် Extruder ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုချက်အရအဖြစ်မြေတပြင်လုံးထှကျလိုင်းစေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်စသည်တို့ဥရောပ, တောင်အမေရိက, အာဖရိက, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, အရှေ့တောင်အာရှနှင့်ရောင်းချခဲ့ကြ ...
ကျနော်တို့ချွေးအမှတ်တံဆိပ် ချ. သုံးစွဲသည့်နှစ်ပေါင်းမြတ်နိုးကျနော်တို့စိတ်ဓါတ်များလက်ခုပ်သံရှိနေဆဲဟု၏မျက်နှာကိုမှပူးတွဲပါမခဲယဉ်း-အနိုင်ရတိုင်းဂုဏ်အသရေ, မြတ်နိုး, ကျော်လွန်ပြီး, တှနျ့ဆုတျကျနော်တို့ရှေ့ဆက်ပါဝါစ ထား. , ခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်း, စဉ်ဆက်မပြတ်ရှေ့ဆက်မသွားဘဲ ကိုယ်ပိုင်။
Mac ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း XC အပြည့်အဝမှာ Automatic High-Speed ​​ကိုဖုန်စုပ် ...